ZULU: Angizange ngashelwa kanjena – MZANSIPORNS.CO.ZA
Ngangi ngazi ukuthi ngingalingeka ngalendlela.
Suku limbs ngiyazizulela nje nomngani wami siziyela ukuyozithengela idrink estolo. Qhamuki yane lobhuti oqashe kwa makhelwane oli charmer ebuya ensebenzini ngemonto yakhe eGolf GTI. Afike eduze kwethu ame bese engicela iskies ai! nami ngiye kuye.
Abingelele “sawbona nkosazane” ngvume nami ngethuke ukuthi isaphumaphi insizwa Lena esabiza intombi ngenkosazane elokshin, ai! eyasemakhaya ngempela bese ithi ” cha mntanomuntu ngithi namhlanje angizijube nje ngikubikele indlela engizizwa ngayo ngawe ngoba seaside iskt ngfela ngaphakathi. Kanti nesizulu siyasho sithi ingane engakhali ifela embelekweni…”.
Bese ithi “Cha nkosazane ngiza angphethe lutho kuwe koda ngilethe inhliziyo yam emhlophe ephuphuma uthando lwakho mntanomuntu” ngvele ngiphelelwe amagama nami bese esuka evalelisa akaceli ngisho inumber ngaleskhati sengthathekile ngangi gcine ukushelwa kanjena.
Ngehle siqhubeke nohambo nomngani Ngisayophuza amanzi.
Next story Exposed coloured from Cape Town
Previous story Mzansi exposed coloured from from Cape Town